Tany Masina - Wikipedia
Tany Masina no iantsoan'ny Kristiana an'i Palestina, izay faritra nahaterahan'i Jesoa Kristy sy nonenany, ka i Jerosalema, izay toerana nahafatesany sy nitsanganany ho velona, araka ny finoan'ny Kristiana, no omena lanjany manokana amin'izany.
Ny narana hoe אֶרֶץ הַקוֹדֵשׁ / Eretz HaKodesh ("Tany Masina") dia tsy ampiasain'ny Jiosy hilazany an'i Palestina, fa ny hoe "Tanin'i Israely" no safidin'izy ireo, na dia ekeny ny maha tany masina an'i Israely, ary indray mandeha ny Tanakh, ao amin'ny Bokin'i Zakaria (Zak. 2.16) no miresaka ny amin'ny Tany Masina . Ny hoe "Tany Masina" dia hita indroa ao amin'ireo boky deoterokanonika, dia ao amin'ny Fahendren'i Salômôna (Fahendrena, 12.3) sy ny ao amin'ny Boky faharoan'ny Makabeo (2Makabeo 1.7).
↑ "Iaveh hanana an' i Jodà ho anjarany eo amin' ny tany masina; ary mbola hifidy an' i Jerosalema izy." (Zak. 2.16, Ny Baiboly Masina)
↑ "Ary Jehovah hanana an' i Joda ho anjarany ao amin' ny tany masina ary mbola hifidy an' i Jerosalema indray." (Zak. 2.13e, Ny Baiboly)
↑ "Efa halanao ny mponina taloha teo amin' ny taninao masina" (Fahendrena 12.3, Ny Baiboly Masina)
↑ "Tamin' ny andro nanjakan' i Demetriosa, taona fahasivy amby enimpolo amby zato, nanoratra ho anareo izahay Jody, tanatin' ny fahoriana mangidy indrindra izay tonga tamin' izany taona izany, dia hatramin' ny nivadihan' i Jasona mbamin' ny mpiandany aminy, tsy hiaro ny tany masina sy ny fanjakana." (1Mak. 1.7, Ny Baiboly Masina)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tany_Masina&oldid=978040"
Dernière modification le 3 Desambra 2019, à 00:50
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2019 amin'ny 00:50 ity pejy ity.